Izindaba - iyini indwangu kaTillill?
Imichilo ye-warp ne-weft iboshelwe okungenani kanye, kuthi lapho izindonga zezinqe kanye nokwemba ziguqulwe ukuze ziguqule isakhiwo sendwangu futhi ngokubizwa kwazo kuthiwa yinsimbi ye-twill.
Ukwakheka kwendwangu kungama-twill amabili aphezulu kanye nendwangu engu-45 ° kwesobunxele, iphethini le-twill yangaphambili licacile futhi ingemuva le-twill elinemibala alibonakali. Amanani we-warp ne-weft asondelene komunye nomunye, kanti nobukhulu buphakeme kancane kunobukhulu be-weft, futhi izandla zizizwa zithambile kunekhakh.
I-twitter eshubile enezintambo zikotini ezingaphezu kuka-32 (18 inches noma ngaphansi) zezintambo zewarp ne-weft; kulungile
Indwangu ye-twill yenziwa ngendwangu yekotini engu-18 noma ngaphansi (amasentimitha angama-32 noma ngaphezulu) njenge-warp ne-weft. I-Twill imhlophe, ihlanganisiwe futhi i-mottled, futhi ihlala isetshenziswa njengendwangu yokugqoka, izembatho zezemidlalo, amasudi, indwangu ye-emery kanye ne-spacers. I-twached bleached ingasetjenziswa njengeshidi futhi ingasetjenziswa njengephepha lokulala ngemuva kokuphrinta. Umbala nezinhlobonhlobo zezindwangu ezinhle ze-twill zenziwe ngama-electro-optical noma amakhalenda futhi zingasetshenziswa njengezambulela noma iziqeshana zezingubo.